XOG MUHIIM AH: DF Soomaaliya oo go’aan adag ku ridi doonta Diyaaraddihii Qaadka ee diiday in ay ka dagaan Muqdisho | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in uu jiray galabtay adag xasaasi ah oo dhexmaray Madaxda Maaliyadda ee dawladda Soomaaliya & Saraakiisha dhanka Socdaalka Duulimaadyada Hawada dalka.
Shirkaas ayaa ku saabsanaa diyaarado diiday in ay Canshuur ku bixiyaan Muqdisho oo ka dagay magaalada Jowhar, taas oo u muuqatay talaabo lagu xagal-daacinayo dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa amar buuxa ku bixisey in Qaadka ka yimaada Kenya sifo sharci ah loo canshuuro, isla markaasna Kiiladiiba lagu canshuuro lacag dhan 2.5$, taas oo ah qiimaha Canshuureed ee ku waajibtay.
Talaabadaas ma farxad galin diyaaradaha Qaadka keena & Ganacsatada soo dajisa, waxayna maanta bilaabeen talaabo aan farxad galin dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Go’aan adag ayaa lagu soo rogi doona diyaaradihii ka dagay Jowhar, sidas oo kale waxaa suuragal ah in la qaado talaabo kale oo ku aadan Canshuurta Qaadka oo la kordhiyo, taas oo horseedi karta arrin dhaqaale oo gobalka ah.